တစ် ဦး ချင်း ၀ င်ငွေ၊ ၀ င်ငွေအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ - ၂၀၁၉ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2019B စျေးကွက်သတင်း
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, တစ် ဦး ချင်း, ဝင်ငွေခွန်တွင်လည်း - 2019
ဇန်နဝါရီလ 9, 2020 ဇန်နဝါရီလ 16, 2020 မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် 401k အတိုင်ပင်ခံ Fiduciary ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, ဝိရောဓိ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
Durig ရဲ့ Portfolio Solutions ၏တစ်နှစ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာမှုကိုအာရုံစိုက်သောသူများအတွက် Durig ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစုစုဖြေရှင်းနည်းများကိုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသောစုဆောင်းမှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောပံ့ပိုးမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရသည်။
Durig's Dow Portfolio of Dow Portfolio သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှအလယ်အလတ် (DJIA) ၏အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောရှယ်ယာအချို့ကိုလွယ်ကူစွာပါ ၀ င်ခွင့်ပြုပြီးအပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှု ၀ င်ငွေများမြင့်မားစွာရရှိစေသည်။
တစ်နှစ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ် Durig ရဲ့ Portfolio Solutionsတစ် ဦး ချင်းစီရရှိနိုင်သောအဓိကအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုသင် ၀ င်ငွေရရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အောက်ပါတွင်ပါ ၀ င်မှုများကိုဤဆောင်းပါးတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည်
Dividend Aristocrats - အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြင့်မားသော Dividends & ကြီးထွားမှု
ဝင်ငွေ Aristocrats - Multi-Asset ဝင်ငွေအစုစု
Dog of the Dow - အပြာရောင် Chip ခွဲဝေမှု
S&P 500 ၏ Dog များ - အပြာရောင် Chip ခွဲဝေမှု
အဆိုပါ Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းကော်ပိုရိတ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုမှတဆင့်ဝင်ငွေမြင့်မားထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အတူ ငွေသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် 5.75% ကျော် နှောင်ကြိုးကူပွန်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းမှလာခြင်းသည်အစုစုသည်မည်သည့်ဘဝအဆင့်တွင်မဆိုသူတို့၏ ၀ င်ငွေကိုတိုးမြှင့်လိုသူများအားအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်စေသည်။ အားလုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြရန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ.
၀ င်ငွေ ၅.၇၅% အထက်နှင့်သင်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
(စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၁၁-၁၃-၁၉ အထိအခကြေးငွေဖြင့်ဖော်ပြသည်)
ကျော် 5.75% တစ် ဦး တည်း Cash Generation ၌တည်၏
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 10.72%
၏3တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 8.87%
၏5တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 8.09%
အာလဖ 10.25 (vs. Benchmark)*
၏ Beta ကို -1.31 (vs. Benchmark)*
၀ င်ငွေအနည်းငယ်နည်းပါးခြင်းပင်သင်ကြည့်ပြီးသောကားအသစ်ကို ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သောအိပ်မက်အားလပ်ရက်ကိုယူရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။
ထို့အပြင်အစုစုတွင်ပါဝင်သောငွေချေးစာချုပ်များ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းတို (၃ နှစ်မပြည့်မီ) သည်အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါးမှုကိုသက်သာစေသည်။
Dividend Aristocrats - မြင့်မားသော Dividends၊ Blup Chip Piece of Mind
Durig ရဲ့ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု ကာလရှည်ကြာခွဲဝေမှုတိုးတက်မှု (အနည်းဆုံး ၂၅ နှစ်) ရှိသည့်အပြာရောင် - ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများ၏အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များကိုသာ ဦး တည်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် ရေ ၎င်းသည် ၀ င်ငွေတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအပြာရောင်ချစ်ပ်များ၏အမြတ်များကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးပွားလာသောကြောင့် ၀ င်ငွေတိုးပွားလာစေသင့်သည့်အစုစုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သည်။
တည်ငြိမ်မှုကိုရှားပါးသောကုန်ကြမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကမ္ဘာကြီးတွင် Durig သည်ဖြေရှင်းနည်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပုံရသည် Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိသိသာသာတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအပြာရောင် -cip မြတ်များအစုရှယ်ယာများမှတဆင့် ၀ င်ငွေ၏တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ တစ် ဦး ချင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, Durig ရဲ့နှင့်အတူ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစု အရည်အသွေးမြင့်မြတ်များအစုရှယ်ယာများ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုလေထန်စေသည်။ Dividend Aristocrats သည်ယနေ့သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဝင်ငွေ Aristocrats - Multi-Asset, မြင့်မားသောဝင်ငွေအစုစု
Durig ရဲ့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု အထူးထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် မြင့် (နှင့်ကြီးထွားလာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငွေသားစီးဆင်းမှုအဆင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖလှယ်မှုများအထိကျယ်ပြန့်စွာရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကဖန်တီးရန်ကူညီသည် အမျိုးမျိုးတစ်ပြိုင်ဘက်အဆင့်နှင့်ဆီသို့ ဦး တည်ရှည်လျားသောလမ်းတတ်၏ အစုစုကိုမတည်ငြိမ်မှုကိုလျှော့ချ နှင့် ဆိုးကျိုးများ.
မတည်ငြိမ်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကိုကျယ်ပြန့်စေပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိရန်ပုံသေ ၀ င်ငွေနှင့်ရှယ်ယာလမ်းကြောင်းများနှစ်ခုလုံးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကျော် 4.5% တစ် ဦး တည်း Cash Generation ၌တည်၏
Durig က ၀ င်ငွေတိုးလိုသောသူများအတွက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်အတူ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု အကုန်အကျနည်းတဲ့လူတစ် ဦး ချင်းစီရဲ့အကောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပါ။ နှင့်အတူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထောက်ခံမှု, ဒီသင့်ကြောင်းတစ်ခုပြည့်စုံအစုစုကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ် ညကိုအေးအေးဆေးဆေးအိပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါ.
ဤအစုစုသည် The Dog of the Dow မဟာဗျူဟာဖြစ်သော The အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ရှိပါတယ် ၎င်း၏ရွယ်တူချင်းထက်သာလွန်, ၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်လက် တစ်သက်တာပြန်လာနှင့်အတူဒါပြုတော်မူပြီ လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှု.
Dogs of the Dow သည်အမြတ်ငွေ ၀ င်ငွေ၏ ၄% နီးပါးထုတ်လုပ်သည် စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု.
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 15.08%
အာလဖ 4.53 (vs. Benchmark)*
၏ Beta ကို 0.75 (vs. Benchmark)*
Durig ရဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏မြင့်မားသောအထွက်တိုးအမြတ်အစုရှယ်ယာအချို့တွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA) လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်အတူ အပြာရောင်ချစ်ပ်မြတ်များ ၀ င်ငွေမြင့်မားခြင်း။ နှင့်အတူ တစ် ဦး တည်းငွေသားမျိုးဆက်နီးပါး 4%, အ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ DJIA ရှိထိပ်တန်းအပြာရောင်ချစ်ပ်အချို့၏အကျိုးအမြတ်များနှင့်ခွဲဝေမှုများကိုဖမ်းယူရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုနေရာချသည် လျော့နည်းသမိုင်းမတည်ငြိမ်မှု Dow ကိုယ်တိုင်ထက် ရရှိသောငွေများကိုသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ပြန်ထည့်ပါ.
S&P 500 ၏ Dogs - ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပြာရောင် Chip ခွဲဝေမှု
ယနေ့ဘဏ္ာရေးစျေးကွက်များသည် ၀ င်ငွေရှိသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပင်လျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲသည် အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးအထွက်နှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေ, များစွာသောဆွဲဆောင်မှုအထွက်နှုန်းကိုဖမ်းယူဖို့တခြားနေရာရှာဖွေနေကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, Durig ရဲ့ S & P 500 ၏ခွေးများ ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် အမျိုးမျိုးနှင့်ကြီးထွားလာဝင်ငွေ တစ် ဦး အဘို့အမြင့်မားအလျှော့ပေးလိုက်လျောအပြာ chip ကိုခွဲဝေဖမ်းယူနေစဉ် ပျမ်းမျှအမြတ်အစွန်း 4% ကျော်အထွက်နှုန်း.
ဘယ်သူက ၀ င်ငွေ ၄% ပိုရချင်မှာလဲ။
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 32.94%
အာလဖ 3.23 (vs. Benchmark)*
၏ Beta ကို 0.73 (vs. Benchmark)*
ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောငွေသားမျိုးဆက်နှင့်၎င်း၏ဆက်လက်စွမ်းရည်နှင့်အတူ အချိန်နှင့်အမျှ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးရွယ်တူချင်းထက်သာလွန် နှင့် တစ်ခုလုံးအဖြစ်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ထက်လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှု, Durig ရဲ့ S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ သူတို့တစ်ချိန်ကနေခဲ့ဖူးသောဆွဲဆောင်မှုအထွက်နှုန်းကိုတောင့်တနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသိသာထင်ရှားသည့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
Portfolio မွမ်းမံမှုများ၊ သတင်းများ၊ စျေးကွက်သုတေသနနှင့်ပိုမိုသောအရာများအတွက်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဘဏ္Advာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ရေ များမှာ ကြီးကြပ်ရေး နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုမူရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤတာ ၀ န်ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်တိုင်အကြံပေးသူများ၏မက်လုံးနှင့်အတူမက်လုံးဖွဲ့စည်းပုံသည်ထိုအရာကိုပြီးမြောက်စေရန်ဆက်ဆံရေးတွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပိုမိုများပြားလာသောအခါအကြံပေးသည် ပို၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး Durig အတွက်နိဒါန်းပါဝင်သည် အများအပြားအစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ကျန်ရှိနေသေးသောဝင်ငွေကို ဦး စားပေးသောအစုစုဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုမိုပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်သည် စျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုအလယ်၌ဒဏ်ခံအတိုးနှုန်းကျဆင်းလာခြင်းနှင့်မနှစ်ကစီးပွားရေးဖိအားများကျဆင်းခဲ့သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးလာစေရန်အာရုံစူးစိုက်နေကြသူများအတွက်, Durig's စီမံခန့်ခွဲအစုစုကိုဖြေရှင်းချက်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်စုဆောင်းခြင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပုံရသည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလိုချင်ပါက Durig ရဲ့ Portfolio Solutions, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်သော၊ ရေရှည်၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကိုစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) အစုစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dividend အရစ္စတိုတယ် 40 အစုစု, ငါတို့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု TD Ameritrade Institutional တွင်သီးခြားအကောင့်များမှတဆင့်အခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား ဤအချက်သည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
Durig Capital သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားအထူးပွင့်လင်းမြင်သာသောဘဏ္fidာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုကုန်ကျစရိတ်အလွန်သက်သာစွာဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအကောင့်အများစုသည် SPIC အာမခံထားသည့်အထူးလျှော့စျေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် TD Ameritrade Institutional တွင်သို့မဟုတ် Interactive Brokers တွင် ၄ င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ခွငဖြေ - ဒီပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြံဥာဏ်အဖြစ်မမှီခိုသင့်ဘူး။ မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်သည်ကိုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ စွန့်စားရသောအရင်းအနှီးဖြင့်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဆုံးရှုံးသွားလျှင်သင့်ဘဝပုံစံနှင့်သင်၏ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ငွေဖြင့်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ရလဒ်များသည်အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမျှဤစာပေးစာယူအကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကတိသို့မဟုတ်အာမခံချက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်သည်။
Durig Capital သည်ဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်မရှိပါ သတင်းအချက်အလက်ကိုအာမခံချက်မရှိပါ။ အနာဂတ်အခြေအနေများ၏စီမံကိန်းကိုကြိုးစားသောအခါမည်သည့်အမျိုးအစားအာမခံချက်ကိုဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည် 12-31-19 ၏အဖြစ်, အခကြေးငွေအသားတင်အစီရင်ခံသည်။ အသုံးပြုသောအဓိကအခြေခံစံနှုန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - BBG Barc US Agg Bond Idx TR, S&P 500 Idx TR USD, SPDR® Dow Jones စက်မှုလုပ်ငန်း Avrg ETF Tr ။
2019 2020 4% 500 abbv adm ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အပြာချစ်ပ် များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် သြဂုတ်လ ben အခြေခံစံနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် နှောင်ကြိုးစျေးကွက် ငွေချေးစာချုပ်များ cah ရှဗရွန် တရုတ်နိုင်ငံ ကိုကာကိုလာ အများပိုင်သတင်း csco cvx အမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးသောအစုစု ခွဲဝေ မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ခွဲဝေကြီးထွားမှု ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် မြတ်များထိတ် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P 500 ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို Durig Fixed ဝင်ငွေ ed emr ရှယ်ယာ ETF ဝိရောဓိ ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Fixed ဝင်ငွေခွန် Fixed ဝင်ငွေ2FX2 FX2 အစုစု FX2 မဟာဗျူဟာ GPC တိုးတက်မှုနှုန်း မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မြတ်သော မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း Bonds မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် IBM က ဝငျငှေ ဝင်ငွေ aristocrats ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး ဝင်ငွေတိုး ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ဝင်ငွေစီး တိုးမြှင့်လာသည် တိုးမြှင့်ခွဲဝေ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု Informa စိတ်ဝင်စားမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ jnj ဇူလိုင်လ kmb KNG ko ခြေထောက် တစ်သက်တာ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် မိုက်ကယ် B Higgins MMM မနက်ခင်း mrk ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံ Multi- ပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာ Nasdaq မြောက်အမေရိက မြောက်အမေရိက Bonds အဝတ်မပါသော NYSE အောက်တိုဘာလ ပိုကောင်းအောင် ပိုကောင်းပါတယ် Pep ပက်စီ performance pfe pg အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ Postmates ကြောငျးအုပျကွီး သုတေသန ဆုတ်ခွါခြင်း ပြန်လာ ပြန်လည်သုံးသပ် မြင့်တက်နှုန်းထားများ S&P S&P 500 စက်တင်ဘာလ စက်တင်ဘာ ရင့်ကျက်မှုတို SP500 တည်ငြိမ်ခြင်း စတော့ရှယ်ယာ စတော့အိတ်ချိန်း စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ မဟာဗျူဟာ t အခွန်အခွင့်အလမ်း tgt ထိပ်တန်းအဆင့် ကုန်သွယ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဘဏ္.ာရေး လှ us အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု vz လမ်းလျှောက် wba WKB xom အသားပေး
ဤနည်းဗျူဟာ၏ရည်မှန်းချက်မှာအပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများ၏မြင့်မားသောအရည်အသွေးခွဲဝေမှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားမိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်မတူကွဲပြားသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အလွန်နည်းပါးသောကုန်ကျစရိတ်အစုစုအတွင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤနည်းဗျူဟာသည်အမြတ်ငွေတိုးတက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည့်အခွန်အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှုမှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာသည်။
LED Trailer မျက်နှာပြင်ကျယ်ဗီဒီယိုငှားရမ်းခြင်း - Bend Oregon
အမေရိကန်အတုငွေကြေး - ဘယ်ကနေလာတာလဲ။
အငှား၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း - သင်၏နောက်အိမ်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ